DOOFAARADA EE JILICSANAANTA SUUNKA: XEERARKA IYO SIFOOYINKA TARANTA GURIGA - XOOLAHA
Ka mid ah tirada badan ee doofaarka doofaarka waa arrin aad u adag in la helo kuwa u qalma labadaba qaabka waxqabadka, iyo xaaladaha la qabsashada cimilada, iyo cuntada loo baahan yahay.
Sidaa darteed, ka hor inta aan la bilaabin doorashadan, waxaa ugu horreyntii qiimeynaya qiimeeynta awoodaada iyo baahidaada, kadibna markaa qiimeynaya nooc kasta oo jinsi ah sifooyinka gaarka ah.
Laakiin weli, waxaa jira noocyo aad u caan ah oo ka mid ah xayawaanka kuwaas oo ku habboon ku dhowaad kasta oo beeraleyda doofaarka.
Waxaan ka hadlaynaa ku saabsan doofaarada ee suunka suunka-cas, faa'iidooyinka sii kordhaya kaas oo aad arki doonaa oo kaliya iyada oo la sii wado la soo bandhigid ee qodobkan.
Doorashada saxda ah ee doofaarka - fure u ah taranta guusha
Wax soo saaridda doofaarka waxay inta badan ku xiran tahay haddii xulashada doofaarka si sax ah loo sameeyey. Sababtan awgeed, su'aashan waa in si fiican loo soo dhawaado, dareenka oo keliya ma aha sifooyinka caadiga ah, laakiin sidoo kale sifooyinka noocyada aad u baahan tahay.
Xaaladda kowaad, kuwa soo socda ayaa loo tixgeliyaa muhiim. sifooyinka muuqaalka ee doofaarka:
Fiiro gaar ah xaaladda guud ee xayawaanka. In daloolka, doofaarrada yaryar waa in ay noqdaan kuwo aad u firfircoon, nool.
Haddii, baaritaanka alaabta la siiyay, waxaad ogaaneysaa in ay kufsanayaan, waa ka fiicnaan inaadan khatar gelin, iyo inaad u gudbiso iibiyeyaasha kale, maaddaama calaamadahani ay muujin karaan jiritaanka cudurada.
Saaxiibka khibrad leh ee meesha ugu horreeya waxaan kula talinayaa inaad dareenka siiso duufka iibsaday xoolaha. Xaqiiqdu waxay tahay haddii ay tahay wasakh - tani waxay muujinaysaa jiritaanka dhibaatooyinka dheefshiidka.
Guud ahaan, tani ma noqon karto dhibaato weyn, laakiin waxay keeni kartaa dhibaato badan, suurtogalnimada dhimashada waa mid sareysa.
Habka ugu fudud ee lagu ogaanayo gobolka xayawaanku waa in la qiimeeyo xaaladdiisa. Haddii uu biskoodo, bjiga ayaa ah mid caafimaad qaba, waana in wax dhibaato ah aysan keenin.
Ku saabsan cudurka isnadaamiska ama calaamado kale oo jirro ah iyo timo jilicsan oo adag. Caadi ahaan, waa inay ahaato mid sahlan.
Xaqiiqda ah in xayawaanka uu awoodi doono in uu helo culeys dheeraad ah mustaqbalka waxaa lagu caddaynaya qaabka jirkiisa: lugaha dhaadheer, dhabarka iyo xajmiga.
Fahmaan in hore ee aad tahay wakiil ka mid ah suunka suunka ah, waxaad si toos ah ugu dul mari kartaa midabka maqaarka ee doofaarka. Ka dib oo dhan, taranka ayaa leh midab cas, iyo sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin suunka dhuuban, kaas oo inta badan daboolaya jidhka oo ka hooseeya garabka garabka.
Dabcan, ha iloowin inaad weydiiso xajmiga iibiyaha: waa muhiim inaad weydiiso caleemaha iyo kalluunka, miisaanka, xaddiga faro-gelinta doofaarka. Kalluumeysatada foosha xun waa inay sidoo kale kuu sheegaan wixii dhab ahaan ah ee uu u adeegsaday beeraha iyo doofaarka si markaa dambe wax dhibaato ah kuma qabin iyaga.
Waa maxay sifooyinka doofaarka guduudan: sharaxda taranka
Ku bilaw inaad heshid buuggan doofaarradani waa sharaxaad ka soo jeedda asalka, ama halkii laga soo iibsan lahaa cayayaanka kuwaas oo loo adeegsaday sidii loo bilaabi lahaa badeecada.
Nooca ugu badan ee loo isticmaalo hilibka doofaarka ee Poltava, oo caan ku ah waxqabadka sare.
Sidoo kale, walxaha hidaha ayaa laga soo qaatay noocyada kale ee la yaqaan ee doofaarka, oo ka tirsan nooca hilibka - Hampshire, Duroc, Krupna Belaya iyo Landrace.
Noocyada la helay ee natiijada ka soo qayb galka noocaan oo kale ah ayaa la caddeeyey inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wax soo saar leh, si dhakhso ah ayaa loo bilaabay in lagu qaybiyo beeraha beeraha ee wadajirka ah ee Midowga Soofiyeedka.
Maanta, doofaarka casaan-gashiga waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya feejignaanta doofaarka warshadaha, laakiin waxaa sii kordhaya helitaanka beeraha xoolaha ee hiwaayadda.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu weyn ee doofaarka lagu sharaxay?
Dastuurka wakiilada ee suunka suunka ah ee doofaarka ayaa aad u xoog badan.
Marka hore, arrintan ayaa u oggolaanaysa inay noqdaan aad u adkeynaya xaaladaha cimilada ee kala duwan, taas oo ah, taranta ayaa suurtagal ah labada koonfurta iyo gobollada waqooyi.
Marka labaad, dastuurkan oo kale, xayawaanku way u nugul yahiin cudurrada kala duwan, ee ma ahan mid deg deg ah oo ku saabsan cuntada.
By habka, quudinta this jilicsan waa mid aad u fudud - doofaarrada ay awoodaan inay cunaan oo korodh miisaanka ku dhowaad kasta oo cunto ah. Dabcan, haddii ay tahay nafaqo badan oo si taxadar leh loo wadaago - markaa natiijadu waxay noqoneysaa mid deg deg ah.
Daryeelka doofaarka madow sidoo kale ma dhicin dhibaatooyin, maaddaama xitaa xaaladaha ugu fudud ee boorashadu ay ku haboonaan doonaan. Dadka qaangaarka ah ee aadka u xooggan waxay u dulqaadanayaan inay hoos u dhigaan heerkulka hawada ilaa + 5ºS, maqnaanshaha siyaabo badan oo socod ah ama meel dabaasha ah.
Dabcan, dharka doofaarku wuxuu ka fogyahay meesha ugu horeysa haddii ay faa'iido u tahay inuu u taro ama aan. Si kastaba ha noqotee, dabeecadda suunka ee suunka gaduudan ee dhinaca garabka garabka ah, waa mid aad u adag in lagu jahwareeriyo qaar ka mid ah noocyada kale.
Sidaa awgeed, suurtogalnimada inaad ku heleysid doofaarka saxda ah ee suuqa oo aad u hesho waxyaabo badan oo wanaagsan oo iyaga ka mid ah ayaa aad u sarreeya.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee caanaha waa suurtogalnimada isticmaalka boorsada casaanka ah ee loo yaqaan "bacriminta" ee noocyada kale.
Isla mar ahaantaana, kuwan soo socda faa'iidooyinka:
Tirada dhirta kale ee caleemaha kale waxay kordhisaa 0.2-0.55 doofaarro.
Wakhtiga aadka u dhiman ee uu doofaarku leeyahay wakhti uu ku gaaro xaalada umusha (qiyaastii 15-18 maalmood).
Si aad ah u yareeyey kharashka quudinta doofaarka. Gaar ahaan, hal kilo oo koritaan ah ayaa lagu bixiyaa 0.3-0.5 qaybo quudin ah.
Boorsooyinka casaanka ah, sida wakiilada caleenta hilibka, waxay sidoo kale kordhiyaan wax soo saarka hilibka iyo farcankiisa, iyadoon loo eegin waxa uu ku beeray beertu. Qadarka hilibka ee baqtiga ayaa kordhaya 2-3%.
La ogaado faa'iidooyinka foosha: waxaad u baahan tahay inaad hore u sii diyaarisid?
Wixii tani waa mid aad u muhiim ah in mar walba qashin qallalan ku jira qalinka.
Xaqiiqdu waxay tahay in doofaarrada guduudan ay yihiin xayawaan aad u nadiif ah, sidaas darteed nadiifintu waa inay sidoo kale ka muuqataa qaybta milkiilaha. Jinsiga qoyan wuxuu xayiraa xayawaanka, iyadoo natiijada ay bilaabi karaan inay lumiyaan miisaankooda.
Sidoo kale Ha u oggolaanin qorshaha qolkahalkaas oo ay doofaarro yihiin. Iyadoo ay jirto difaac adag, xaaladahaas oo kale waxay u muuqdaan kuwo dhaawac ah.
Guud ahaan, caqabadahaasi waa kuwa kaliya ee loogu yeeri karo iyadoo la xidhiidha jilicsanaanta suunka.
Tilmaamyada kale ee muhiimka ah ee doofaarrada casaanka iyo suunka
Sharaxaadda doofaarka gaduudan, waa in la ogaadaa inay yihiin xayawaan aad u weyn, oo lagu xisaabtamayo marka la dhisayo qalimaan.
Foomamka Hilibka, taas oo ah, dhammaan qeybaha jidhka ee muruqyada, ayaa aad u horumarsan. Madaxa xayawaankani waa mid aad u ifaya, yar yar. Qulqulatadu sidoo kale waa yar yihiin, oo qadar ahaan loo dhigay.
Jidhku waa mid qoto dheer, ballaaran, dheer, kan, sida kor ku xusan, wuxuu muujinayaa suurtagalnimada helitaanka miis aad u weyn. Isla mar ahaantaana, musqulaha suunka guduudka ah ma aha oo kaliya muddo dheer, laakiin sidoo kale xoog leh.
Sida laga soo xigtay faallooyinka soo saaraha doofaarka, xaaladaha noocaas ah, marka doofaarku ku dhaco dhuunta miisaankooda, sababtoo ah miisaankoodu weyn yahay, kuma dhicin wakiillada caanahan.
Sidee noqon kartaa mid wax soo saar leh marka uu korayo guriga: khibradda doofaarka doofaarka
By nooc ka mid ah doofaarrada cas-cas waa hilib. Tani waxay ka dhigan tahay in badi bakhtigoodu ka kooban yahay hilib, iyo unugyada dufanka ayaa si aan fiicnayn u kora. Heerka 6-7 ee vertebra ee maskaxda, dhumucda dufanka shakhsiyaadka caanuhu waxay ku kala duwanaan karaan 21 ilaa 25 millimitir, taas oo aad u hooseeya doofaarka.
Guud ahaan, qaangaar ahaan, boorar soo saaraya si fudud u gaari miisaanka 300-340 kiiloogaraam. Miisaanka cawska, dabcan, wuu ka yar yahay, wuxuuna ku kala duwanaan karaa 200 ilaa 250 kiilo, kaas oo sidoo kale aad u badan.
Dhererka jirka ee shakhsiyaadka lab ah ayaa sidoo kale la tartami kara nooc kasta oo doofaarro ah, tan iyo tilmaamahan waxay u dhigmi karaan 180-185 sentimitir. Dhererka jidhka ee dhererka celceliska waa 160-169 sentimitir.
Qodobka muhiimka ah ee waxqabadka nooc kasta oo doofaarka ah waa awooda lagu soo saari karo caruurtooda. Marka laga hadlayo doofaarrada gaduudan, qodobkaan waa in lagu qiimeeyaa sidii faa'iido kale, tan iyo markii loo arko in ay yihiin kuwo badan oo la isku daro.
Gaar ahaan, xitaa qoysaska caadiga ah, waxay ku beeraan laba ama hal faruuro waxay soo saaraan min 10 ilaa 12 doofaar. Intaa waxaa dheer, miisaanka nool ee buulka, kaas oo gaaray da'da 2 bilood, inta badan waxay u dhexeysaa 177 illaa 188 kiilo garaam.
Beeraha doofaaradu waxay ka warqabaan kiiska marka mid ka mid ah uu beerta ku sharaxay 3 farrower wuxuu keeney 36 casaan oo caafimaad qabta. Waqtiga naaquska doofaarka, miisaankoodu wuxuu ahaa 660 kiiloogaraam.
Xayawaanka yaryar waxay u koraan si fiicansababtoo ah jirkoodu wuxuu awood u leeyahay inuu si qumman u isticmaalo nafaqooyinka uu helo.
Horeba 170-205 maalin, dukaamada dhallinyaradu waxay gaadhaan miisaan culus 100 kiiloogaraam, ma yareynin heerka koritaanka mustaqbalka. Isla markaa, celceliska celceliska maalinlaha wuxuu noqon karaa 480 ilaa 870 garaam, taas oo ku xidhan badnaantii iyo qiimaha nafaqada ee ay heleen.
Qiimaha 1 kg ee koritaanka waa 3-3-3.8 oo keliya oo ah qaybo calafka, taas oo kuu oggolaaneysa inaad hesho 56-62% hilibka marka la soo saaro.
Daryeelka doofaarka cas: Waxaan bixinnaa heer sare oo wax soo saar
Inkasta oo dhammaan faa'iidooyinka kor ku xusan ee caanaha, wax soo saarka waxay ku xirnaan doontaa si toos ah daryeelka mulkiilaha, iyo sidoo kale faahfaahinta daryeelka xayawaanka. Iyadoo taasi jirta, ma aha oo kaliya sharciyada diyaarinta dhismaha si ay u ilaaliyaan doofaarrada, iyaga oo siinaya meel bannaan oo lagu socdo, laakiin sidoo kale toos u quudinta.
Xeerarka quudinta doofaarka iyo dadka waaweyn
Dhanka kale, quudinta doofaarka waa mid sahlan, sababtoo ah ma ahan mid la dooran karo oo ku saabsan cuntada, gaar ahaan caleemaha lagu sharxay annaga.
Waxay noqon karaan mashiish qoyan oo qoyan oo ku filan oo ka yimaada khudradda xididka leh iyo qashinka cuntada ka soo baxa jikada. Si kastaba ha ahaatee, sida hab dhaqameedka sida caadiga ah ee quudinta ma aha had iyo jeer bixiyaan natiijada la rabo marka la eego wax soo saarka xoolaha. Sababtan awgeed, casriga ah Cunno-yare waxay ku qasbanyihiin inay quudaan.
Xaaladdan oo kale, doofaarka waxaa lagu quudin jiray caawimooyin isku dhafan kala duwan, taas oo loogu talagalay qiimaha nafaqada ay ku daraan lafo ama kalluunka cunto, cunto karis kala duwan, iyo sidoo kale dheellitamiin gaar ah oo fitamiino ah.
Meesha kaliya ee muhiimka ah ee quudinta qalalan waa tan doofaarka ayaa u baahan doona in la siiyo biyo badan, taas oo ka hortagi doonta dhibaatooyinka dheefshiidka iyo dheelitirka biyaha jirka.
Guud ahaan, loogu talagalay beerista suunka suunka-cas, dabcan, ikhtiyaarka quudinta labaad ayaa ka fiican. Intaa waxa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho miisaan aad u sarreeya miisaanka maalinlaha ah ee xayawaanka, waa ku haboon tahay milkiilaha.
Ka bacdi, uma baahnid inaad karisid baradho maalin kasta, iskudhaf qaybaha kale ee cuntada iyo qaadashada baaldiyada culus ee doofaarka. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo waa in la buuxiyo xayawaanka quudinta dhowr jeer maalintii maalintii oo ku shub biyo.
Doofaarrada doofaarka waa in si gaar ah loo siiyaa qaab dhuleed. Xaqiiqdu waxay tahay in xayawaanku awoodi karin in uu cuno miro dhan, sidaas darteedna wuxuu tarjumi karaa quudinta.
Baradhada iyo khudaarta cagaaran ee kale waxay ka fiican yihiin inay bixiyaan doofaarro la kariyey, hubi inaad biyo daadisid. Qeybta qashinka, waxaa la siiyaa oo keliya tiro yar, sida fitamiin.
Ma aha lagama maarmaan in la siiyo doofaarka badan oo quudin, sidaas darteed wuxuu ku sii jirayaa ee xayndaabka.
Noocyada hilibka, oo ay ku jiraan doofaarrada casaanka ah, waxaa muhiim ah in lagu daro borotiinka cuntada: cuntada miraha ah, kalluunka ama hilibka iyo cuntada lafaha, caanaha dufanka leh, khamiirka cawska.
Wixii doofaarro yaryar ah, waa mid aad u muhiim ah in marka hore ay cuni karaan caanaha doofaarka, isla markaana waxay ka bilaabanayaan maalinta shanaad ee aad bilaabi kartid in yar. Waxaa muhiim ah in la siiyo quudin, iyada oo miisaanka lagu daro iyaga. Tani waxay ogolaan doontaa si loo tababaro doofaarka 'caloosha' ee cuntada kalluunkaiyo sidoo kale quudinayaan beertooda si fiican.
Horeba da'da 1.5 bilood waa muhiim in laga saaro hooyada, laakiin maaha inay qiimo u yeelato, waa lagama maarmaan inay hore u barteen inay cunaan waqtigan.
Sida loo kobciyo digirta casaanka ee guriga: faa'iidooyinka ugu muhiimsan
Haddii aad fiirinaysay dhammaan macluumaadka kor ku xusan, ka dib, waxaa laga yaabaa inaad adigu naftaada awoodday inaad ku soo gabagabeyso in aysan adagtahay inaad ku kiciso doofaarrada casaanka ah ee guriga.
Tani waa midka ugu macquulsan shuruudaha xabsiga iyo nooca cuntada ay bixiso.
Markaad haysato doomaha beerahaaga iyo doomaha beeraha, waxaad si sahlan u heli kartaa farac wanaagsan. Sidaa darteed, faa'iidada ka soo jeeda doofaarku ma aha oo kaliya tiro badan oo hilib ah, laakiin sidoo kale suurta galnimada in la ogaado dhallinyarada.
Hase yeeshee, waa muhiim inaad tixgeliso qodobada guud ee la aqbalay:
Wixii dayactirka shakhsiyaadka qaangaarka ah waxay u baahan yihiin inay qaataan qalin ballaadhan gudaha gudaha pigsty.
Aad u fiican, haddii aad xayawaan siisid fursadda xagaaga si aad ugu socoto waddada, dabaasha u dabaasha.
Waa mid aad u muhiim ah in meel loogu talagalay socodka la siiyo digir yar yar (laakiin aan la wadaagin dadka waaweyn). Hawlahaas oo kale, waxay noqon karaan kuwo aad u xanuun badan, lafdhabarkana inta badan waxay yeeshaan.
Muhiim ah oo ku saabsan bacriminta taranka: dhoobada iyo faraca dhoobada
Sidii hore loo xusay, noocani waa mid isku dhafan. Iyadoo jiritaanka boon bacriminta, dhibaatooyinka leh dhadhanka beereed caadi ahaan ma dhicin.
Hawlaha galmada ee dadka dhalinyarada ah waxay bilaabi karaan bilowga bisha 8aad ee nolosha. Xilliga jilitaanka ee doofaaradu waxay socotaa ilaa 115 maalmood. Waxay ku dhasheen buulal weyn, laakiin beertu waxay muujinaysaa dareen badan, iyaga oo bixinaya dhammaan daryeelka lagama maarmaanka ah. Isla markiiba dhalashada ka dib, dhimashada ilamaha this waxaa si aan caadi ahayn loo arkay.
Weli waxaa muhiim ah in si toos ah loogu soo bandhigo faro-jebinta, maxaa yeelay tiro badan oo caruur ah ayaa ka dhigaysa mid beerta.
Waxa kale oo muhiim ah at this point si aad u jiifiso badan oo hay ah oo qalalan ee qalinka leh doofaarka, taas oo iyada lafteeda ka dhigi kartaa buulka a nafteeda.
Sidoo kale, waa mid aad muhiim u ah inaad cuntada ku xaddiddo, adoo siiya biyo badan oo nadiif ah oo cusub.
Xaqiiqada ah in doofaarku si dhakhso ah u keeni doono dhallinyarada, waxay muujin doonaan caddaynta kor u kaca xubinta taranka iyo qanjidhada caanka ah, oo si weyn u yareynaya caloosha. Maalin kahor iyada farrowing, waxay heshaa caano, doofaarku wuxuu bilaabmaa in uu jiifo marar badan oo uu kor u qaado kubla.
Iska ilaali iftiinka macmalka ee doofaarka, iyo sidoo kale kuleylinta, haddii geeddi-socodka xayiraadu dhacdo xilliga qaboobaha.